कुन राशीलाई विवाहका लागि कुन महिना उपयुक्त, थाहा पाउनुहोस् – Jagaran Nepal
कुन राशीलाई विवाहका लागि कुन महिना उपयुक्त, थाहा पाउनुहोस्
मंसिर र चैत महिना विवाह, व्रतबन्ध केही पनि जुर्दैन।
वृष राशि भएकाले भदौ, पुस र वैशाख महिनामा विवाह गर्न मिल्दैन।
मिथुन राशि भएकाले असोज, माघ र जेठ महिना, कर्कट राशिले कात्तिक, फागुन र असारमा विवाह गर्न मिल्दैन।
सिंह राशिलाई मंसिर, चैत र साउन तथा कन्या राशिलाई पुस, चैत र भदौ, तुलालाई माघ, जेठ र असोज, वृश्चिक राशिलाई फागुन, असार र कात्तिक महिनामा विवाह जुर्दैन्।
धनुका लागि चैत, साउन र मंसिर, मकरका लागि वैशाख, भदौ र पुस, कुम्भका लागि जेठ, असोज र माघ तथा मीन राशिका लागि असार, कात्तिक र फागुन महिना उपयुक्त हुँदैनन्।
त्यतिमात्र होइन, विवाहका लागि बृहस्पति ग्रह पनि जुराउनुपर्ने हुन्छ। बृहस्पति ग्रह १३ महिनामा एउटा राशिमा घुम्छ। बृहस्पति ग्रह जन्मदाको राशिबाट ४, ८, १२ मा पार्नु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा विवाह गरियो भने त्यो विवाह दैविक र आध्यात्मिक हुँदैन भनिन्छ।
विवाहका लागि जोडी चयनमा कुन राशिका लागि कुन राशि उपयुक्त मानिन्छ ?
हाम्रो ज्योषितशास्त्र अनुसार यो समयमा जन्मिएको व्यक्तिको विवाह यो दिशातिर यस्तो राशि यस्तो रूप, रंग, स्वभाव भएकोसँग विवाह हुन सक्छ भन्न सकिन्छ। यो ज्योतिषको गहिरो अध्ययनबाट आउँछ। सामान्य रूपमा आफ्नो राशिबाट गन्दै जाँदा ६, ८ र १२ को राशि पर्‍यो भने विवाह टिक्दैन । जस्तो-मेषबाट गन्दै जाँदा कन्या ६, वृश्चिक ८ र मीन १२ हुन्छ।
यसमा एउटा अर्को नियम पनि छ, केटीको राशि अगाडि आयो र केटाको पछि आयो भने विध्वंस हुन्छ, केटाको राशि अगाडि आएर केटीको पछि आयो भने अलिअलि मिल्छ। अर्को नियम राशि परस्पर फरक ६, ८ पर्‍यो तर राशिको स्वामी मित्र भयो भने मिल्छ। देवगण, मनुष्य तथा राक्षस गणको पनि नियम छ, जुन जन्मको नक्षत्रबाट निर्धारित हुन्छ। एउटै गणमा प्रीति हुन्छ।
नाडी भन्ने अर्को हुन्छ एउटै नाडीमा विवाह भयो भने सन्तानमा बाधा हुन्छ भनिन्छ। धर्मशास्त्रमा एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन, सन्तानमा वंशाणुगत खराबी देखिन्छ भनिन्छ, नाडीको नियम ठ्याक्कै त्यही हो।
विज्ञानसँग पनि सम्बन्धित छ ?
विज्ञान भनेको प्रविधि मात्र होइन, दर्शन पनि हो। हामीले विज्ञान भन्नेबित्तिकै प्रविधिमा मात्र जोड दियौं, प्रविधि विज्ञानलाई प्रस्तुत गर्ने यन्त्र हो। यन्त्र मात्र विज्ञान होइन, मुख्य कुरा त दर्शन हो। हामी दर्शनबाट अभिप्रेरित हुनुपर्‍यो। ज्योतिष विज्ञान दर्शन पनि हो, विज्ञान पनि हो। अहिले मानिसको भाग्य र भविष्य बताउने कुनै विज्ञान छ भने त्यो ज्योतिष विज्ञान मात्र हो।
कतिपयले यसमा अविश्वास गरिरहेका छन् नि ?
ढिलोचाँडो सबै हामीकहाँ आउछन्। अहिले पनि कतिपय उम्मेदवार टिकट लिन–जित्नदेखि लिएर कोही अपरेसनको साइत जुराउन हामीकहाँ आउँछन् । हामीले कतिपय अपरेसनको डेट नै पोस्टपोन्ड गरिदिएका छौं। मारकेश्वर भन्ने एउटा दशा हुन्छ, त्यो दशा चलेका बेला मान्छे मर्न सक्छ, त्यसैले हामीले अप्रेसन सार्न समेत लगाएका छौं।
चिना कसरी बनाइन्छ ?
हामी जुन बेलामा जन्मियौं, त्यतिबेला आकाशमा ग्रहहरू घुमिरहेका हुन्छन्। कुन ग्रह कहाँ घुमिरहेको हुन्छ, अर्को हामी कहाँ पञ्चांगको पात्रो हुन्छ, त्यसमा पनि ग्रह राखिएको हुन्छ। त्यसमा ग्रहहरू कति डिग्रीमा छन् भनेर लेखिएको हुन्छ। हामी मान्छे जन्मिसकेपछि पात्रो पल्टाएर इष्टघडी निकाल्छौं। इष्टघडी भनेको मान्छे जन्मिएको समय र सूर्यबीचको अन्तर हो। इष्टघडीले कति नक्षत्र, कति तिथि भेट्यो भनेर निकाल्छ।
ग्रह चाहिँ के हो ?
ग्रहको सम्बन्ध गुरुत्वाकर्षणसँग हुन्छ, त्यसले हाम्रो दिमागलाई पनि तान्छ भन्ने धारणा छ।
राशि भनेको के हो ?
राशि भनेको चन्द्रमा हो। जस्तो मेष राशि भनेको जन्मदा चन्द्रमा मेष राशिमा थियो भन्ने हो। चन्द्रमालाई जलीय ग्रह भनिन्छ। औंसी र पूर्णिमाका बेला समुद्रमा ज्वारभाटा आउँछ, हत्या र आत्महत्या औशी र पूर्णिमाको आसपासमा हुन्छ भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा ७५ प्रतिशत पानी हुन्छ। मायाप्रीतिमा पनि हामी चन्द्रमा नै हेर्छौ। चन्द्रमाबाट राशि मिलाइन्छ।
चन्द्रमा कमजोर हुँदा के हुन्छ ?
चन्द्रमा कमजोर भयो भने मन बढी आत्तिन्छ। चन्द्रमा बलियो भयो भने मानिसहरू विन्दास हुन्छन्।
कस्ता युवती बढी लच्छिनका हुन्छन् ?
त्यसका लागि हाम्रो भाषामा सामुद्रिक शास्त्र भन्ने छ, जसबाट शरीरको लक्षण हेरिन्छ। शरीरको लक्षण हेर्दा दाँत उछिट्टिनु, फाट्नु गृहस्थ जीवनका लागि नकारात्मक मानिन्छ। दाँत टम्म मिलेको हुनुपर्छ। हाँस्दा डिम्पल पर्नु हुँदैन, डिम्पल पर्ने व्यक्तिहरू व्यभिचारी हुन्छन् भनिन्छ।
हत्केलाका औंला टम्म मिलेको हुनुपर्छ, हात छाम्दा कोमल हुनुपर्छ, यस्ता युवतीहरू सुन्दर हुन्छन्, सुकुमार हुन्छन्। जन्मदाको समयमा लग्न कुण्डलीमा जसको बृहस्पति वा शुक्र केन्द्रमा बस्यो त्यस्ता केटीहरू लच्छिनका हुन्छन्।
कस्ता युवक शक्तिशाली हुन्छन् ?
नाक चुच्चो भएका व्यक्ति राजसी ठाँटबाटका हुन्छन्। निधार ठूलो तथा आयातकार भएको व्यक्तिमा राजसी गुण हुन्छ। हत्केला तथा बूढी औंला जति लामो भयो त्यो व्यक्ति त्यति नै बौद्धिक हुन्छ। हत्केलामा उध्र्व रेखाबीच हुँदै मध्यको औंलाको टुप्पोमा पुगेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति ठूलै ठाउँमा पुग्छ।